YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, July 07
ဈာန်ပျံကြွ နိုင်သော ဘုန်းတော်ကြီး
BY YeYint Nge ... 7/07/20130comment
“ ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်နေသည့် သီရိလင်္ကာ သမ္မတ ရာဇပက်ကသျှ ”
သီရိလင်္ကာ သမ္မတ မဟိန္ဒ ရာဇပက်ကသျှသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်လည်း ကျော်ကြားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက်လည်း ဘာသာရေးအရ ထူးမြတ်သည့် နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာဗောဓိ စေတီတော်ကျောင်းတွင် တနင်္ဂနွေနေ့က ဆက်တိုက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု သတင်းကြောင့် စိတ်ထိခိုက် တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ရသည်။
“ဒီသတင်းကြောင့် သမ္မတကြီး ရာဇပက်ကသျှ စိတ်ထိခိုက် တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ရပါတယ်”ဟု သမ္မတ၏ မီဒီယာ ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှုး ဝိဇယနန္ဒ ဟယ်ရာက ပြောကြားသည်။
သမ္မတကြီးက မဟာဗောဓိ ဘုရားကျောင်း အကြီးအကဲနှင့် စကားပြောခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဒေလီမြို့တော်ရှိ သီရိလင်္ကာ သံရုံးတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ၄င်းထံ တင်ပြရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အရာရှိက ဆိုသည်။
မဟာဗောဓိ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရှိ လူလေးဦး အပါအဝင် ရဟန်းတော် နှစ်ပါးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိစေခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ဗုံးရှစ်လုံး အတွဲလိုက် ပေါက်ကွဲခဲ့မှုသည် ဗီဟာပြည်နယ်ရှိ ဘုရားကျောင်း မြို့ ဗုဒ္ဓဂါယာကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်သည့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ဘုရားဖူးခရီးအဖြစ် သွားရောက်ကြသည်။ ၄င်းနေရာသည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရရှိတော်မူရာ နေရာ တနည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ရာ နေရာဟု ဆိုကြသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်း ချနိုင်း အခြေစိုက် ဗုဒ္ဓဂါယာ အသင်းနှင့် တွဲဖက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်သည့် မဟာဗောဓိရုံးများသည်လည်း သံသယရှိနေသည့် တမီးလ် အုပ်စုများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသေးသည်။
credit to ဘုန်းဉာဏ် (Bone Nyan)
India Today သတင်း
ဗုဒ္ဓဂယာအား အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သီရိလင်္ကာသမ္မတမှ ပြင်းထန်စွာသတိပေး
သီရိလင်္ကာသမ္မတ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောပြီ။ အိန္ဒိယအစိုးရကိုလည်း ရှစ်ကြိမ်တိတိ ဒီလို ဆက်တိုက်ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အမြန်ဆုံး တရားခံတွေကို အရေးယူပေးပို့ တောင်းဆိုက်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနကို ဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း။ အခုဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ အထွတ်မြတ်ထားရာ မဟာဗောဓိစေတီတော် တိုက်ခိုက်တာ သိရလို့ စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သီရိလင်္ကာသမ္မတဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကမှ အဲ့ဒီမဟာဗောဓိစေတီတော်ကြီး သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပြီး ပြန်လာတာပါ။ အိန္ဒိယရဲ့ သြဇာကြီးမားတဲ့ BJP ပါတီကလည်း ဒီနေရာဟာ နိုင်ငံရဲ့
အထွတ်အမြတ်ထားရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်သလို နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးပါတယ်လို ဆိုပါတယ်။ ထောက်လှန်းရေးတွေ အားနည်းမှုကြောင့်လို့ ခုလို ဖြစ်ရတာလို့လည်း ဝေဘန်ထောက်ပြနေပါတယ်။
Buddha FM ၏စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ပုံနှိပ်-ထုတ်ဝေဥပဒေကြမ်းကြောင့် ယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီပြော
ပုံနှိပ်-ထုတ်ဝေဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မူလသဘောတူညီထားမှုတွေ ချိုးဖောက်ခံလိုက်ရ တာကြောင့် ယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ ယူဆတဲ့အကြောင်း ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့မှာ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၁/၂၀၁၃
လက်ပံတောင်း စီမံကိန်း စာချုပ် ပြင်ဆင်ပြီးပြီ
6 ဇူလိုင်လ 2013 - 16:42
မြန်မာ ပြည်သူတွေ ကြားမှာ သံသယတွေ ကြီးကြီး မားမား ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်လက်ပန်းတောင်း တောင်ကြေးနီ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာချုပ် ပြင်ဆင် ချက်တွေကို ကြာသပတေးနေ့ တုန်းက အပြီးသတ် ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ပေါင် တရုတ် ကုမ္ပဏီရဲ့ အထွေထွေ မန်နေဂျာက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ စာချုပ် စာတမ်းပါ စည်းကမ်း တွေကို လိုက်နာပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်တွေကို တာဝန် သိသိ နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အကြောင်း တရုတ်ပြည် ကုမ္ပဏီများ အသင်းကလည်း ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းထားသူ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရွာသားတွေ ဆန္ဒပြဆက်စပ်အကြောင်းအရာများတိုင်းရင်းသားရေးရာလက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်က သဘောတူညီချက်မှာ အကျိုး အမြတ် ၃၀ ရာနှုန်းကိုသာ မြန်မာ အစိုးရက တိုက်ရိုက် ရရှိခဲ့ရာကနေ အခုတော့ ၅၁ ရာနှုန်းကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ အထွေထွေ မန်နေဂျာက ထုတ်ဖော် ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က တရုတ် သံရုံးရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေ လုပ်နေတဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲမှာ သူက ခုလို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ မနက်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာအစိုးရ ဘဏ္ဍဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အကျိုး အမြတ် ပိုပြီး ပေးမယ့် စာချုပ် ပြင်ဆင်ချက် တခုကို အပြီးသတ် သဘောတူခဲ့ ကြောင်း သူက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ သဘောတူညီချက် အရ အခု လက်ပံတောင်းတောင်မှာ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ကြေးနီ စီမံကိန်းက ရတဲ့ အကျိုး အမြတ်ရဲ့ ၅၁ ရာနှုန်းကို မြန်မာ အစိုးရက ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီနဲ့ အခြား အစုစပ် ကုမ္ပဏီလို့ သူက ရည်ညွှန်းတဲ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက်တို့က ကျန်တဲ့ ၄၅ ရာနှုန်း အကျိုး အမြတ်ကို ခွဲဝေယူရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ဒါကို မြန်မာ အစိုးရ ဘက်က မကြာခင် လူထုကို အသိပေး ထုတ်ပြန် ကြေညာ လိမ့်မယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံက စီးပွား ရေး ကုမ္ပဏီတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ တရုတ် သံရုံး အရာရှိတွေ တက်ရောက် ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင် ၁၃၅ ခု ထက် မနည်းရှိတဲ့ တရုတ် ပြည် ကုမ္ပဏီများ အသင်းက သူတို့ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါ လိုက်နာမယ့် အဆိုပြုချက် စည်းကမ်းချက် ၆ ချက်ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ အဓိက ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို လုပ်ကိုင်ရာမှာ နှစ်နိုင်ငံ ဥပဒေတွေနဲ့ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက် တွေကို တိတိ ကျကျ လိုက်နာပြီး၊ အလုပ် သမား အခွင့် အရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေး တွေကိုလည်း အလေးထား မယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ် နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လူမှုရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အကူ အညီတွေ ပေးခဲ့တာ ကိုလည်း အကျယ် တဝင့် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ စည်းကမ်းဥပဒေ တွေကို လိုက်နာမယ်၊ မြန်မာတွေ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက် မယ်လို့ ဆိုဆို၊ မြန်မာ နိုင်ငံ စစ်အုပ်ချုပ် ရေး စံနစ် လက်အောက် မှာရှိ ခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်း က သဘောတူ ခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေ ကြားမှာ သံသယတွေ ကြီးကြီး မားမား ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည် လက်ခံမှုကို ရအောင် ဆက်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်သလို ပွင့်လင်းစ မြန်မာ နိုင်ငံကို ဝင်လာ ကြမယ့် နိုင်ငံ တကာ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှု နှစ်ရပ်ကို တပြိုင်နက် ကြုံနေရ တဲ့ အနေ အထား ဖြစ်နေပါတယ်။
ကံကျမ္မာက ဦးဇင်းတို့ မြန်မာကျေင်းသားရဟန်းတော်များကို မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်..
"ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွား"
ယနေ့ နံနက်အစောပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွတ်အမြတ်ထားရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် လက်လုပ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဂါယာရှိ မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကို ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲက ‎#AFP သို့ ပြောကြားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏အဆိုအရ ပေါက်ကွဲအား မပြင်းထန်သော ဗုံး ၆ လုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခြင်းဟုဆိုသည်။ ၇ လုံးမြောက် ဗုံးကို ညဏ်တော်အမြင့် ပေ ၈၀ ရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အနီးတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားသည်။
ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ ဘီဟာပြည်နယ် ‎#Patna မြို့တော်၏ တောင်ဘက် ၆၈ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဘုရားဖူးလာရောက်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ခရီးသွားများလည်း လာရောက်လေ့ရှိကြပြီး အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအတွင်း လာရောက်သူအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဗုဒ္ဓဂါယာကို ယူနက်စကိုအဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
(ဓာတ်ပုံ - ဗုဒ္ဓဂါယာရှိ မဟာဗောဓိညောင်ပင်)
Ashin Kumuda Bawdhitahtaung's photo.
ဗုဒ္ဓဂယာဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်း ဦးဇင်းတို့ မြန်မာကျောင်းသားရဟန်တော်တစ်ပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်..ခုချိန်ထိတော့ ခွဲစိပ်ကုသမှုခံယူနေရပီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေမရှိကြောင်း ဆေးရုံရောက် သူငယ်ချင်းက ပြောကြားပါတယ်..
အမှန်ဆိုရင် ယနေလို့ တနင်္ဂနွေနေ့ ကျောင်ပိတ်ရက် နံနက်စောစောအချိန်တိုင်း ရဟန်းတော်အတော်များများ မဟာဗောဓိစေတီ် တ၀ိုက်နှင့် ၊ မဟာဗောဓိပင်အောင်တွင် တရားထိုင် ပရိတ် ပဌာန်းရွတ်ရန်သွားရောက်ကြပါတယ်...ကံကျမ္မာက မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်..ယနေ့နံနက်တွင် အနည်းငယ်သာ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်.....အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုပဲ ပြောရမလား မသိပါ.....မဂဓတက္ကသိုလ် ဖိုင်နယ်စာမေးပွဲက ၅ ရက်နေ့ကပီးသွားတာကြောင့် .ကျောင်းသားအများစုနေထိုင်ရာ မဂတက္ကသိုလ် အဆောင် ( ၃ ) တွင် M.A Final စာမေးပွဲ ဖြေပီးသွားတဲ့ ကျောင်းသားများစုပေါင်းပီး အထိမ်မှတ် ကုသိုလ်အဖြစ် ဆွမ်းကပ်ကြပါတယ်...ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စလုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက် ယနေ့နံနက်စောစော မဟာဗောဓိဘက်ကို မသွားရောက်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး....အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် မဟာဗောဓိပင်အောင်တွင် မြန်မာရဟန်တော်များအရေအတွက် ဒီထက်ပိုပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါတယ်..အခုပဲ ညီတော်ဖိုင်နယ်ကျောင်းသားရဲ့ ဆွမ်းဆက်ကပ်မှုပီးဆုံးသွားပါတယ်...ဆွမ်းအနုမောဒနာအဖြစ် သတ္တ၀ါအားလုံး ကျန်းမာစေကြောင်း...အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်.A Final စာမေးပွဲ ဖြေပီးသွားတဲ့ ကျောင်းသားများစုပေါင်းပီး အထိမ်မှတ် ကုသိုလ်အဖြစ် ဆွမ်းကပ်ကြပါတယ်...ဆွမ်းဝေယျာဝစ.အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် မဟာဗောဓိပင်အောင်တွင် မြန်မာရဟန်တော်များအရေအတွက် ဒီထက်ပိုပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါတယ်..အခုပဲ ညီတော်ဖိုင်နယ်ကျောင်းသားရဲ့ ဆွမ်းဆက်ကပ်မှုပီးဆုံးသွားပါတယ်...ဆွမ်းအနုမောဒနာအဖြစ် သတ္တ၀ါအားလုံး ကျန်းမာစေကြောင်း...အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်.
ကနေဒါမှာ ရေနံတင် ရထား မီးလောင် ပေါက်ကွဲ
7 ဇူလိုင်လ 2013 - 01:07 GMT
ကနေဒါနိုင်ငံ Quebec ပြည်နယ်က လက်ခ် မက်ဂန်းတစ် မြို့လေးမှာ ရေနံတင်ရထား ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်လို့ ကြီးကြီးများများ မီးလောင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တဲ့ နေရာဟာ အမေရိကန် နယ်စပ်အနီးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး နာရီအတော်ကြာထိ မီးငြိမ်းသတ်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေရပါတယ်။မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြားလည်း ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ပေါက်ကွဲတဲ့ ရထား အနီးအနားက အိမ်တွေလည်း မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ရထားကုမ္ပဏီ ပြောခွင့်ရသူကတော့ အခု ရထားဟာ တွဲထိန်း ဝန်ထမ်းတွေ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ ရပ်နားထားစဉ်မှာ ရထားက အနိမ့်ပိုင်းဆီကို လိမ့်ဆင်းသွားခဲ့ပြီး ဘာကြောင့်ဆိုတာ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒါဏ်ရာ ရခဲ့သော ရဟန်းတော် ဆေးကုသရန်အလှုကောက်ခံ
Dhammadownload Web Master's photo.
နေ့ နံနက် ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗောဓိပင်အောက်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒါဏ်ရာ ရခဲ့သော ရဟန်းတော် ဦးဝိလာသဂ္ဂ (မြင်းခြံ) အတွက် ပြန်လည် ဆေးကုသရန် စရိတ်များကို ကူညီပံပိုးပေးရန် ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုမှ ဝိုင်းဝန်း အလှုကောက်ခံပေးပါသည်။
စကာင်္ပူတွင်ရှိကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့သည်..
အောက်ပါ DBS Saving Plus အကောင့်ထဲသို့ တိုက်ရိုက် လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်...
အလှုငွေ လွှဲပြီးပါက အလှုရှင် စာရင်းပြုစုရန်အတွက် အောက်ပါ အကြောင်းအရာ ၃ ချက်ကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့ပေးပါရန်လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်...
၁) အလှုရှင်၏ နာမည် အပြည့် အစုံ၊
၂) လှုဒါန်းသည့် အကြောင်းအရာ - ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် ဗုံးထိခံရသော ရဟန်းတော် ဦးဝိလာသဂ္ဂ (မြင်းခြံ)။ အတွက်
၃) လွှဲသည့် ပမာဏ -
ယ္ခုလို လူနာများ ပြန်လည် ကျန်းမာလာအောင် ပံ့ပိုးပေးသော အလှုတော်တွင် ပါဝင် လှုဒါန်းခြင်းကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစုမှ အလွန်တရာမှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိပါသည်...
သူတော်ကောင်းများသည် သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝလျှက် နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ..
ဤသို့ပြုအပ်သော အလှုဒါနကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုများမှ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်..
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု...... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......
“ ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်ထ...
ဗုဒ္ဓဂယာအား အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သီရိလင်္ကာ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၏ သဘောထားထုတ်ြ...
ကံကျမ္မာက ဦးဇင်းတို့ မြန်မာကျေင်းသားရဟန်းတော်များက...
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒါဏ်ရာ ရခဲ့သော ရဟန်းတော် ဆေးကု...